Ahoana ny fomba hijerena Disney Plus amin'ny Roku? - Fialam-Boly
Roku dia mpisava lalana amin'ny fanomezana boaty fanamboarana matevina hamadika ny fahitalavitra mahazatra anao ho fahita fahitalavitra. Mahazo miditra amin'ny rindrambaiko maro karazana ianao sy ireo endri-javatra maro tsy voatanisa. Mety hiteny mihitsy aza ianao fa izy io dia aingam-panahy ao ambadiky ny Amazon Fire Stick, Apple TV, ary fitaovana hafa mitovy amin'izany.
Disney + dia amin'ny Internet serivisy mivantana nomen'ny Disney ho an'ny olona mandefasa fandaharana amin'ny fahitalavitra sy sary mihetsika tiany indrindra . Izy io dia ahitana fanangonana am-boalohany mahaliana sy atiny maro karazana. Raha misoratra anarana amin'ny Disney + ianao dia hahazo traikefa tsy misy doka miaraka amin'ny atiny premium sy maro hafa.
Misy Disney Plus ve ao amin'ny Roku? Azonao atao ve ny mampiasa azy io amin'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena? Ahoana no ahafahanao misoratra anarana? Mila VPN ve ianao? Ity lahatsoratra ity dia mitondra anao ny valin'ireo fanontaniana rehetra ireo. Ankoatr'izay, saika ny zava-drehetra dia fonosinay ho toy ny famakiana haingana ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Disney Plus amin'ny Roku.
Ahoana ny fomba hahazoana Disney + ho an'ny Roku?
Disney + dia manana fifanarahana iraisan'ny rehetra amin'ny rafitra fandidiana maro karazana toy ny Android, Windows, Apple, ary Mac. Azonao atao ny miditra ao a mpizaha tranonkala . Raha manana fitaovana ianao dia mifanaraka amin'ny saika ny sehatra marani-tsaina rehetra toy ny smartphone, iPods, tablette ary maro hafa.
Ankoatr'izay, mifanaraka amin'ny boaty fananganana sy fahitalavitra mahira-tsaina izy io. Noho izany dia mahazo miditra amin'ny Roku ianao. Disney + dia mifanaraka amin'ny fitaovana Roku isan-karazany, ao anatin'izany ny TV, hazo mikoriana , Ultra LT, Premier ary Express. Na izany aza, tsara kokoa ny manome antoka fa manana rindrambaiko vaovao sy havaozina ianao alohan'ny hanandramanao hametraka Disney Plus.
Ity misy torolàlana tsikelikely hahazoana Disney + amin'ny Roku:
Tsidiho ny trano amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Home ao amin'ny fitaovanao Roku.
Mikorisa ary tadiavo ireo ‘fantsom-pifandraisana’ ary kitiho eo.
Ao no ahitanao safidy hikarohana fantsona.
Raha vantany vao hitanao izy dia tsindrio ilay izy hanampiana azy. Hanaraka izany ny dingana fametrahana.
Indraindray, fitaovana Roku mety hangataka ny fanamafisana pin. Mba omeo azafady.
Raha vantany vao tafapetraka dia modia mody ary jereo Disney +.
Atombohy ny Disney + anao ary raha mpamandrika ianao dia midira.
Raha tsy mpamandrika ianao dia atombohy ny fitsapana maimaimpoana anao.
Rehefa misoratra anarana amin'ny fizahana maimaimpoana ianao dia hanontany anao ilay fonosana hisafidianana.
Ity no ho ampangaina aminao aorian'ny fitsarana.
Raha vantany vao vita ny fizotranao, afaka miditra amin'ny atiny Disney + ianao.
Iza amin'ireo fitaovana Roku no tsy manohana an'i Disney +?
Disney Plus dia tsy manohana ireo fitaovana Roku taloha. Ny lisitra dia misy tsorakazo streaming 3420X, LT Models an'ny 2450X, Roku 2 HD 3050X, Roku 2 XS 3100X, Roku HD 2500X. Izay kinova na fitaovana eto ambanin'ireto dia tsy mifanaraka, ary koa. Izany dia vokatry ny tsy fisian'ny fanavaozana ny lozisialy sy ny olana hafa mitovy amin'izany.
Azonao atao ve ny manala famandrihana amin'ny Disney Plus?
Eny, afaka misoratra anarana amin'ny Disney Plus ianao. Misy fomba roa hanaovana an'io.
Voalohany, jereo ny fampiharana Disney + amin'ny fampiasana ireto dingana manaraka ireto:
Sokafy ny Disney Plus amin'ny Internet Browser na Roku
Mandehana any amin'ny piraofilinao
Mitadiava 'Kaonty' ary kitiho eo
Ho hitanao ao ny fizarana ‘Ny famandrihanao
Ho hitanao ao ny manafoana famandrihana safidy. Atombohy izany.
Raha nisoratra anarana tamin'ny Disney + tamin'ny alàlan'ny fivarotana fantsona Roku ianao dia mety tsy hampiseho aminao ny safidy voalaza etsy ambony. Roku dia raisina ho mpanome tolotra antoko fahatelo. Tsy mila miahiahy! Ireto misy dingana tokony harahina:
Tsidiho ny tranokala Rokuamin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny Tsindrio Eto .
Midira ao amin'ny kaonty Roku izay manana fantsona Disney +.
Ho hitanao ao ilay safidy ‘Tantano ny famandrihanao.
Ao anatin'ilay safidy dia hahita Disney plus ianao.
Tokony hisy safidy famandrihana hanafoana eo akaikiny. Raha tsy izany dia kitiho ny Disney + raha manambara ny safidy.
Tsindrio ny safidy fanafoanana famandrihana ary hamafiso.
Ho foana ny Disney + anao.
Tadidio fa raha misoratra anarana ianao amin'ny fiandohan'ny tsingerin'ny faktioranao dia efa nandoa izany ianao. Aorian'ny fisoratana anarana, Disney plus dia ho hita mandra-pahatongan'ny volan'ny faktiora manaraka. Raha eo ianao Fitsarana Disney + , alao antoka ny fisoratanao anarana alohan'ny hifaranan'ny fitsarana, raha tsy izany dia hiatrika fanovana ianao. Tsy misy politika famerenam-bola amin'ireo lafiny ireo.
Inona no omen'ny Disney +?
Vantany vao misoratra anarana amin'ny Disney Plus (na andrana) ianao, dia mahazo miditra amin'ny serivisy tsy ampiana. Manana fidirana tanteraka amin'ny famoahana vaovao sy kilasika amin'ny fotoana rehetra avy any Disney ianao. Manome atiny avy amin'ny Marvel Cinematic Universe, Star Wars, Pixar Studios, ary tamba-jotra National Geographic. Noho izany, manana be dia be ianao fanangonana fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao, sarimihetsika ary atiny voalohany hiditra amin'ny 'on-demand.
Raha mitsidika ny fivarotana fantsona ofisialin'i Roku ianao, dia ho hitanao fa manohana ny fizarana efijery efatra miaraka. Izany no safidy lafo indrindra natolotry ny mpanome tolotra mivantana. Mety voafetra amin'ny fitaovana Roku ihany izy io, nefa mendrika hodinihina.
Ankoatr'izay, mahazo fampidinana tsy voafetra ianao hatramin'ny fitaovana 10 amin'ny fotoana rehetra. Raha mandinika ireo lafin-javatra ireo ianao dia sandan'ny vola be io.Disney + koa miasa tsy tapaka amin'ny fanomezana ny atiny 4K UHD kilasy tsara indrindra. Na dia voafetra aza ny fahafaha-manana, azonao atao ny manantena ny hitombo ny tranomboky amin'ny ho avy.
Azonao atao ve ny miditra amin'ny Disney + ivelan'i Etazonia?
Amin'izao fotoana izao, Disney plus dia misy ao amin'ny Roku ao Etazonia. Raha te hiditra ao ianao avy amin'ny firenena na faritra hafa, mila mampiasa VPN ianao . Roku tenany ihany no misy any Etazonia, UK ary Kanada. Hamarino tsara fa a VPN mifanentana amin'ny Roku . Hahita VPN premium maro miaraka amin'ny mifanentana ianao. Rehefa mampihetsika ny VPN, mifandraisa amin'ny mpizara any Amerika, dia hahazo miditra tanteraka amin'ny Disney + ianao. Mbola mila famandrihana ihany ianao satria tsy misy Disney + maimaim-poana handefa any Etazonia.
Ankehitriny ianao dia afaka mankafy Disney plus amin'ny ankamaroan'ny fitaovana Roku. Mitondra anao ny fialam-boly hijerena ny atiny Disney tianao indrindra miaraka amin'ny ankohonanao sy ny namanao, indrindra amin'ny fahitalavitra. Ny hany ilainao dia famandrihana ary afaka mandeha tsara ianao. Azonao atao ihany koa ny mijery ireo fonosana Disney + misy eny an-tsena raha te hanana fonosana sy tolotra mpanangona sanda.
Amboary ny kaody error Disney Plus Error 83
10 Alternatives iTunes tsara indrindra amin'ny taona 2020
Andao ho fantatra momba ny Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
miasa cyberghost miaraka amin'ny netflix
mijery sarimihetsika vaovao hd maimaim-poana
ahoana no ahafantarako rehefa tapitra ny fitsarana ambaratonga voalohany ahy
Ahoana ny fomba hampiasana ny fotoana fampisehoana amin'ny mpianatra spotify
kaody xbox 360 maimaim-poana tsy misy fanadihadiana
ny fomba hanampiana pluto tv amin'ny tv smart samsung